EU oo cunoqabateyn ku soo rogeysa Ukrain - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
EU oo cunoqabateyn ku soo rogeysa Ukrain
La daabacay fredag 21 februari 2014 kl 14.11
Midowga Yurub ayaa xaley go’aan ku gaarey in Cunaqabatayn ku soo rogto dadkii ku lug lahaa dhibaatada dadka ku dhinteen ee ka dhacdey shaley dalka Ukrain. Cunaqabataynta waxaa lagu soo rogayaa shaqsiyaad u dhow xukumada dalkas, kuwaas hantidooda Yurub taala la xanibayo sidoo kale laga hor istaagayo in ay u soo socdaalaan gudaha EU.
Laakiin waxaa muuqata in cunoqabatyntaan aan lagu soo rogi doonin madaxweynaha dalkas Janukovitj. Balse hanjabaada counoqabateyn ee EU waxaa barbar socda isku day diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro rabshada dadku ku la’deen ee ka taagan dalkas Ukrain. Tan iyo xaley wasiiro arrimo dibadeen ka socda Midowga Yurub ayaa wado-xaajood kula jirey dowladda dalkaas si layskugu soo dhaweeye mocaaradka mudeharaadka dhiagaya iyo xukumada. Waan sabababtaa daraadeed sababta laga waabo in laga reebo dadka cunoqabateynta lagu soo rogayo madaxweyne Jonukovitj; sidaas waxaa yeri Jens Möller oo ah wariyaha uga soo warama Radio Iswiidhen magaalada Bryssel ee ah xarunta EU.
- Haddi Jonukovitj lagu daro liiska cunoqabateynta, taas waxey ka micno noqoneysaa dharbaaxo kama danbeysa ah oo wajiga looga dhuuftey asaga. Markaas suurto gal ma noqoneyso in asaga wado-xaajoodka lala sii wado. Inta ay socoto wado-xaajoodka wasiiradda arrimaha dibadda ee EU ku doonayaan in lagu soo afjaro gacan ka hadalka dalkaas ka taagan ma leyn maayo in cunoqabateynta lala beegsanayo Jonukovitj ayuu yeri Jens Möller wariyaah uga soo warama Radio iswiidhen magaalada Bryssel. Waxaa la rajeynayaa in cunoqabateynta EU ay hirgalsho maalmaha soo socda, sida uu sheegey